Firefox oo ku guuleysatay Dagaalkii Browser | Martech Zone
Firefox oo ku guuleysatay Dagaalkii Browser
Jimco, Diisambar 8, 2006 Isniin, Disembar 17, 2018 Douglas Karr
U fiirsashada saamiga suuqa ee dhawaanta ee daalacashada ayaa bixinaya xoogaa aragti ah oo ku saabsan cidda guuleysata iyo dagaalladda. Firefox waxay kusii socotaa xawaare, Safari kor ayey u sii gurguuraysaa, Internet Explorer-na wey luminaysaa. Waxaan jeclaan lahaa inaan kaga faaloodo seddexda 'aragtiyahayga' waxa dhacaya.
Kadib burburinta Netscape Navigator, IE runtii wuxuu noqday heerka dahabka ee shabaqa. Browser-ku wuxuu ahaa mid fudud, shaqeynaya, horeyna loogu rakibo dhammaan alaabada Microsoft. Sidoo kale, ActiveX waxay lahayd iftiin gaaban, oo looga baahan yahay dadka intiisa badani inay adeegsadaan IE. Maxaad u adeegsaneysaa daalacayaal badan markii midkood uu taageerayo dhammaan heerarka kala duwan ee shabakadda? Aniga qudhaydu waxaan ahaa isticmaale IE illaa nooca 6.
Iyadoo la adeegsanayo Internet Explorer 7, adduunka naqshadeynta websaydhka ayaa runtii neefta ku haysay biraawsar ay iyagu u qaabeyn karaan taas oo ka falcelin doonta iyadoo la raacayo tiknoolajiyada ugu dambeysa ee Waraaqaha 'Cascading Style Sheets'. Nasiib darrose, IE 7 wuu hungoobay. Dib-u-eegista IE Blog, runti xitaa kuma jirin raadaarka illaa biraawsarku beta noqdo oo qaylada murugada ayaa ka timid warshadaha naqshadeynta websaydhka. Qaar ka mid ah horumarka daqiiqadii ugu dambeysay ayaa saxay qaar ka mid ah arrimaha… laakiin kuma filna inay ka dhigaan adduunka naqshadeynta mid faraxsan. Xusuusnow - in badan oo adduunka naqshadeynta ah ayaa ku shaqeynaya Macs… la'aanta Internet Explorer. Laakiin, nasiib daro iyaga, macaamiishooda waxay adeegsadaan Internet Explorer.
Laakiin waa hoog, Internet Explorer 7, Microsoft waxay si weyn u beddeshay isdhexgalka u dhexeeya isticmaalaha iyo macmiilka. Tikniyoolajiyadda aniga oo kale, isbeddelada qaarkood waxay ahaayeen nooc qabow. Laakiin adeegsadaha aan macquul ahayn… oo uusan awoodin inuu si fudud ugu wareego guudka shaashadda ayaa labadaba wareersan oo wareersan. Waxay bilaabeen inay eegaan waxa kale ee meesha yaal. Firefox.
Sawir laga soo qaaday http://marketshare.hitslink.com/
Tilmaamida shaqeynta guud ee biraawsarka ee ku laabanaysa Navigator, Firefox waxay noqotay xalka fudud ee beddelka Internet Explorer. Fallaagada Microsoft fallaagada ah, Firefox waxay noqotay qof kacsan waxayna bilowday inay amaahdo suuqa.
Hawlaha dheeriga ah sida sheybaarada heer sare ee ku-dhex-galka tikniyoolajiyadaha kale waxay faa'iido weyn u noqotay Firefox. Waxay sii wadaan inay soo jiitaan horumariyeyaasha iyo naqshadeeyayaasha shabakadda si isku mid ah… maaddaama Firefox ay leedahay wax ka soo kabasho adag, Cascading Style Sheet, iyo qaybaha saddexaad ee fiilooyinka ka dhigaya horumarka iyo is-dhexgalka mid fudud.
Suuqa sidoo kale wuu isbedelayaa. ActiveX waa wada dhimatay laakiin Ajax waa soo kordheysaa, waxay amaahineysaa daalacashada sida Firefox. Farsamo ahaan ma jirto sabab loo adeegsado Internet Explorer maalmahan oo dhan. Haddii IE ay sameyn karto, Firefox way ka sii fiicnaan kartaa. Cusbooneysiinta Windows-ka waxaa loo isticmaali jiray biraawsarka, laakiin hadda waa la rari karaa oo la rakibi karaa la'aantiis.
Firefox kama aysan tagin isticmaalkeeda iyo qaabeynteeda sida Microsoft ay ku sameysay IE 7, taasoo u sahleysa dadka isticmaala inay u wareegaan Firefox oo ka socda IE 6 si fudud oo fudud. Waa xarrago, deg deg ah, oo aan lahayn.
Iyadoo dhowaan Mac uu ku riixay suuqa kombuyuutarka guriga… maahan PC-ga Jaamacadaha, Haweenka iyo Carruurta mar dambe. Mac-keyga cusubi wuxuu wadaa OSX, Windows XP (oo la mid ah) aniguna waan wadi karaa daalaco kasta oo meeraha ku yaal si aan u qaabeeyo una horumariyo. Iyadoo Safari horay loo shubay, shaki kuma jiro inay saami helayso maadama Macs ay helayaan saamiga. Saadaasheyda ayaa ah in Safari ay wajihi doonto Firefox, in kastoo.
Microsoft waa inay dareento cabsi badan - laakiin dhab ahaan iyaga ayaa khaladkooda leh. Waxay tirtireen baahi kasta oo loo qabay barowsarkooda, adeegsadayaashooda shisheeyaha ah, nashqadeeyayaasha la fogeeyay, horumariyeyaasha la fogeeyay, OO haddana waxay u oggolaanayaan kuwa kale inay ku qaataan qotomayaasha kale (mobilada)
Internet Explorer runtii waa is-baabi'in. Ma hubo halka ay diiradda saarayaan macaamiishoodu gabi ahaanba.
Ka dib markaad soo dejiso oo aad rakibto Firefox, u gudub Ku-darka qayb ka mid ah oo u soo dejiso nuxurka wadnahaaga. Qof kasta oo sidan sameeya, waxaan jeclaan lahaa inaad isticmaasho biraawsarka laba toddobaad ka dibna aad ku noqoto boggeyga oo aad ii sheegto waxaad u maleysay.
Waxaan ahay nin Microsoft ah in ka badan toban sano hadda, markaa anigu ma ahi basher. Si kastaba ha noqotee, waxaan dareemay inaan ku qasbanaaday inaan soo dhexgalo oo aan ka wada hadlo istiraatiijiyadda istiraatiijiga ah ee kooxda IE ay si dhab ah isu soo galeen.
Tags: dagaal browserdaalacashadaFirefoxieinternet Explorer 7Microsoftbadmaaxe netscape
Blog-ga ugu koraya ee Dunida?
Waxaan ahay SOB (Waana ku faanayaa)!
8, 2006 at 11: 36 PM
Waan ku raacsanahay inaysan jirin sabab loo isticmaalo IE mar dambe, laakiin nasiib daro adduunka wali waxaa ka buuxa novices internet oo aan aqoon wax ka fiican. Waxaan rajeynayaa ereyga afka inuu beddeli doono taas aakhirka.
9, 2006 at 3: 54 AM
Waxaan ahaa isticmaale ku faraxsan Firefox dhowr sano hadda. Waxaan dareemayaa inaan jeclahay sababtoo ah kordhinta aan la tirin karin, iyo kororka amniga Internet Explorer.
Markii aan helay MacBook Pro-kayga cusub horraantii sannadkan, waxaan isku dayay Safari dhawr toddobaad, laakiin waxaan ku dhammaaday inaan dib ugu laabto Firefox. Fursadaha loogu talagalay u-dejinta ayaa ku dhowaad aan xad lahayn. Sannadkii la soo dhaafay, waxaan si guul leh ugu beddelay qoyskeyga oo dhan (iyo inta badan saaxiibbaday) Firefox.
9, 2006 at 11: 27 AM
Bawlos ma uusan dooneynin inuu i ceebeeyo - laakiin waxaad ogaan doontaa inaan u tifatiray cabsida aan u qabo filles! Qabashada wanaagsan ee Bawlos oo fiicnaa inuu i soo diro! Dadyowga i garanaya waxay ogyihiin inaan khabiir ku ahay barashada Ingiriisiga. Runtii waa saaxiib kaa badbaadin doona ceebeynta naftaada!
Bawlos wuxuu ku leeyahay bog weyn barta:
17, 2006 at 1: 17 AM
Waxaan gabi ahaanba ku raacsanahay in Firefox uu garaacayo IE 7 ama wixii ka dambeeya….
Sababta loo garaacayo waa Firefox Plugins iyo Firefox Add-ons.
Waxaan u maleynayaa in bisha Luulyo 2007, IE uu istaagi doono 35%
17, 2006 at 2: 21 AM
Assalaamu, Fazal. Waan kuugu raacsanahay! Iyadoo Firefox 3 Alpha horeyba u baxday, Mozilla waxay sii wadaysaa raad aysan Microsoft la tartami karin.
Feb 3, 2007 markay ahayd 6:46 PM
Waxaan ku rakibay IE7 kumbuyuutarka kumbuyuutarka oo si fiican ayey u shaqeysay ka dib markii aan qaar ka mid ah la xiriiray laakiin markii aan ku rakibey laptop-kayga, wax walba way joojiyeen. Haddii aanan helin in barnaamijka (iyada oo aan lagu daro wax dheeri ah) sidoo kale lagu soo daro barnaamijyadayda hoosta qalabka ma awoodi doono inaan raaco gabi ahaanba.
Waan ka walwalsanahay, waxaan bangiyada ka sameeyaa internetka mana hubo inaan isticmaali karo Foxfire. Waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo laakiin waxaan u baahanahay macluumaad dheeri ah.
Feb 3, 2007 markay ahayd 7:39 PM
Bangiyada casriga ee casriga ahi waa kuwo waafaqsan shuruucda internetka. Walaaca ayaa noqon lahaa taageerida SSL (Lakabka Sockets Secure Layer), taasi waa qaab qarsoodi ah oo isgaarsiinta xogta u dhaxeysa biraawsarkaaga iyo bangiyada server-yadooda internetka. Firefox waxay si buuxda u taageertaa SSL si la mid ah sida IE ay u taageerto xaddidaad la'aan Habka ugu cad ee lagu ogaan karo inaad isticmaaleyso SSL waa inaad ku sugan tahay cinwaan https: // halkii aad ka heli lahayd http://. Si kastaba ha noqotee, labadaba IE iyo Firefox (iyo Opera iyo Safari) sidoo kale waxay leeyihiin tilmaamayaal muuqaal ah iyo habab xaqiijin ah in shahaadada SSL iyo codeynta ay ansax yihiin oo si sax ah u shaqeynayaan.
Si kale haddii loo dhigo - waa inaadan haysan wax arrimo ah. Dabcan marna dhib malahan inaad eegto bangigaaga “Taageerada” si aad u ogaato inay taageersan yihiin Firefox iyo in kale. Xaqiiqdii waxaad kaheli doontaa biraawsar wanaagsan - aad dhakhso badan leh waxyaabo badan oo wanaagsan.
Waad ku mahadsantahay booqashadaada… iyo faallooyinkaaga!
Nov 3, 2007 saacadu markay tahay 5:50 PM
Firefox waxay dhaaftay astaamaha soo dejinta 400-milyan, waxaana rajeyneynaa, inay sii dheeraan doonto. Beddelka ayaa had iyo jeer ah dariiqa horumarka.
Laakiin ku guuleysiga dagaalka biraawsarka… weli waa xilli hore taas.
Nov 3, 2007 saacadu markay tahay 11:24 PM
Waxaan u isticmaali jiray IE sanado, sii wad isticmaalkiisa oo si saraaxad leh ayaan ugu qanacsanayn faa iidooyinka heerka isticmaalaha ee Firefox. Waxaan ka shakisanahay in inta badan dadka isticmaala ay daryeeli karaan wax ka yar. Waan kugu raacsanahay, si kastaba ha noqotee, in isbeddelada IE 7 ay yara yara wareereen.
Nov 21, 2007 saacadu markay tahay 8:11 PM
Waan ku raacsanahay fikradahaaga ku saabsan IE7 iyo inaan ahay naqshadeeye websaydh, waxyaabo yar ayaa layga daayay markii IE7 la sii daayay. Hadda waxaan ku guda jiraa dhisidda degel cusub waxaanan la kulmay arrimo qaarkood oo la xariira faallooyin laakiin ma jiraan wax weyn (illaa iyo hadda). Waxaan u isticmaalay kaliya IE7 wax yar laakiin waxaan filayay in bood aad u weyn laga bilaabo 6.0 iyadoo loo tixraacayo taageerada CSS, iwm.
Anigu waxaan ahaa isticmaale Firefox sanado badan waxaan qortay shaqaale aad u yar oo cusub intii aan ku soo jiray. Waxaan u maleynayaa in waxa ugu badan ee i soo jiita, iyo in badan oo ka mid ah dadka isticmaala FF, ay tahay xaqiiqda ah inay tahay naqshadeeye websaydh / horumariye saaxiibtinimo leh iyo habeyn u wadida Waxaan u maleynayaa in IE sii burburin doono waxaanan u maleynayaa in Microsoft ay u baahan doonto mucjiso markan. Xawaaraha ay Firefox kasbatay iyo Safari si tartiib tartiib ah ayey uheleysaa, waa mid ka sarreysa IE iyo xaqiiqda ah inay ku sii dhacayaan soo saarista shabakad jaangooyo u hoggaansan, ma caawinayso ugu yaraan
Annaga naqshadeeyayaasha webka ayaa kaliya siin kara iyaga fursado badan 😛
Nov 22, 2007 at 7: 44 AM
Faallooyinkani waa kuwo marin habaabin ah. Sida ku cad tirakoobyadii ugu dambeeyay ee aan arkay saamiga IE ayaa "hoos u dhacay" laga bilaabo 85.88% saamiga adduunka ee Q4 2005 ilaa 78.5% Q3 2007. Taasi waa hoos u dhac 7.3% ah qiyaastii laba sano.
Dhanka kale, Firefox ayaa ka soo wareegtay 9% ilaa 14.6% isla waqtigaas. Taasi waa koror 5.6% qiyaastii laba sano ah.
Safari waxay ka tagtay 3.1% ilaa 4.77% - kor u kac aan mudneyn in laga hadlo.
Haa Firefox waxay ku sii kordheysaa IE, laakiin IE wali waxay umuuqataa in kabadan 5x isticmaaleyaasha.
Xogtaani waxay ka timid Wikipedia “Usage_share_of_web_browsers” dabcanna dhinac ama dhinac kale ayaa loo kala eexan karaa.
Sida muuqata adduunka intiisa badan dan kama lihi waxa ay naqshadeeyayaasha shabakaddu ka qabaan. Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan u qaabeyno dadyowga halkii aan ka walwali lahayn dookhayada shaqsiyadeed.
Nov 22, 2007 at 8: 48 AM
Mahadsanid Rick! Ma weydiin karnaa halka aad kaheleyso macluumaadka ku saabsan istaatistikada?
Waan kugu raacsanahay, laakiin waxaa jira sheeko taxaddar leh oo aan danaynaynin waxa naqshadeeyayaasha websaydhku u malaynayaan… taasina waa in naqshadda websaydhku ay sii ahaan doonto hawlgal qaali ah marka ay tahay inaad naqshadeyso meel ka baxsan heerarka si aad u qanciso 85.88% saamiga suuqa!
Nov 22, 2007 saacadu markay tahay 2:25 PM
Had iyo jeer waa mudnaan in la naqshadeeyo dadka laakiin xaqiiqda ah in Microsoft aysan la socon qof kasta oo kale, ayaa ka dhigaysa shaqooyinkeenna kuwo aad u adag. Waxaan is arkaa mararka qaar inaan qoro xaashiyo qaab gooniya u gaar ah oo kaliya IE oo kali ah taasna waqti ayey qaadataa. Micnaheedu maahan wax celcelis ahaan isticmaalaha. Kaliya waa wax laga xumaado markii biraawsarka hogaaminaya baakadka uu yahay midka ugu yar ee waafaqsan heerarka webka.
Nov 22, 2007 saacadu markay tahay 3:44 PM
Wax dood ah kama haysto walaacaaga xagga aragtida naqshadeeyaha, in kasta oo aanan hubin sababta aad uga walwalsan tahay inaad dad badan ka qaadi karto adeegyadaada. Ma dadka ayaan diyaar u ahayn inay iyagu iska bixiyaan? Sida iska cad kuwan waa arrimo farsamo oo ay tahay in laga gudbo.
Waxaan kaliya ka hadlayaa soo jeedinta ah inuu jiro dhaqdhaqaaq ballaaran oo ka fog IE. Xogta (illaa inta aan u sheegi karo) ma taageerayaan sheegashadaas, in kasta oo ay jiraan dhammaan nashqadeeyayaasha iyo SEO-yada si kale u sheeganaya oo si aan dhammaad lahayn kor ugu qaadaya FF. Haddii ay tahay inay dhiirrigeliyaan waa su'aal kale, waxaana laga yaabaa inaad gebi ahaanba ka saxan tahay taas.
Sida aan ku xusay faalladayda, isha aan ka helay waxay ahayd Wikipedia - maahan isha dhawaaqeedda ugu cajaa'ibka badan, laakiin tirooyinku waxay u muuqdaan kuwo si fiican u dhammaystiran…
Nov 23, 2007 saacadu markay tahay 5:42 PM
Waxaad u badan tahay inaad ku saxantahay labada arrimood, Rick. Waxaan ku doodi karaa in IE ay sii wado inay qayb weyn ku leedahay suuqa maxaa yeelay waxay ka mid tahay Nidaamka Howlgalka, in kastoo. Haddii ay soo dejisan laheyd soo dejin iyo doorasho xalaal ah, runtii waxaan aaminsanahay in FF ay laadaneyso badhida.
21, 2007 at 6: 51 AM
Waxaan ahaan jiray barnaamij iyo horumariye web. Sannadkii 2003 ayaan shil galay oo aan madaxa ku dhuftay. Koodh qorista ayaa imika aniga igu badan, markaa hadda waxaan ahay joe caadi ah ..lol
Sikastaba, waxaan isticmaali jiray Linux ilaa 1996 oo kale (xusuusnow Caldera-markii ay ahayd inaad u ogolaato inay iskeed u soo degto 2 maalmood..lol). Bog furayaasha shabakadu waligood ugama fiicnayn Firefox kahor. Markuu Firefox soo baxay, waxay ugu weyneyd adeegsadayaasha Linux (Thunderbird sidoo kale). Maaddaama Microcrap uu had iyo jeer khiyaaneeyo isticmaaleyaasha Linux, iyagu lugta ayey isku toogteen. Waxaan xasuustaa Firefox / Thunderbird inay noqotay qeybta internetka ugu sareysa Linux si fudud. Ma ahan wax weyn, oo waad dhigi kartaa wax kasta oo kordhin ah oo aad jeceshahay (adblockl!). Sidaa darteed, way fududahay ama way culus tahay sidaad u sameyso. Ma jiraan qaybo aan loo baahnayn. Tabsku waa qabow oo yar yihiin.
Waxaan hada isticmaalayaa Windows xp, maxaa yeelay 'kuwa kale' halkan nasiib daro waxay uga dhigeen shuruud ah iibsashada pc-kan, marka 'way' u isticmaali karaan (doqomo). Taasi waa sababta aan isla markiiba u soo dajiyay Firefox / thunderbird. Markii aan mar kale isticmaalay Windows-ka, Waan necbahay Muuqaalka Muuqaalka, welina waxaan rabaa in Firefox dib loo soo celiyo, iyada oo la ii kordhiyay (xitaa waan badbaadiyey dhammaan faylasha isku xidhka. Faylasha iyo calaamadeynteyda Linux, oo waxaan u soo geliyey Winxp!).
Dhawaan, kumbuyuutarkeyga ayaa dib u bilaabay habeenki, waxaanan lahaa ALIEN oo fiirinaya baruurta baruurta leh HUGE tabs aan tagi doonin. Baararka qalabka qaboojiyaha wuxuu qaadaa 1/5 shaashadda dambiga leh! WAAN NACAY! Dadka kale ee halkan jooga oo dhan way neceb yihiin Aaway badhanka JOOJI Qofna ma doonayo in biraawsarka uu qaato boos aad u badan! Tabs weyn, xitaa marka uu jiro kaliya 1 bog !!
Ka waran bogga? Xitaa ma arki kartid maxaa yeelay waxaad aragto oo dhan waa BROWSER! Waa arrin mashquuliya, oo aan u adkaysan kari waayey. Microsoft si ku habboon ma leh meel ay kaga dacwooto midkoodna. Maxay tahey qashin qashin ah. Go'aankeyga shaashadda waxaa la dhigay 1152 × 864 mana qiyaasi karo sida ay noqon doonto 800 × 6000! Xitaa ma awoodi doonaa inaan arko bogga?
Sidaas 2 suulka hoos IE7! Qof walba wuu neceb yahay, waana dhimashada IE. Qosol badan, waxay lahaayeen biraawsar ok ah, laakiin iyaga oo koobiyeysanaya Firefox, waxay hadda leeyihiin qashin. Waxaan ula jeedaa .. waa maxay waxaas oo dhan oo ku yaal qashin-qubka, oo meeye badhanka intiisa kale ??
Marka, mahadsanid Microsoft, adigu naftaada ayaa ugu dambaysay! Hadda waxaan waqti badan ku qaataa sharraxaadda kuwa kale ee soo waca oo weydiya sababta uu biraawsarkoodu si lama filaan ah u xun yahay una adag yahay, oo aan uga caawiyo inay ka saaraan IE7! Qofna ma doonayo!
May 28, 2008 at 12: 30 PM
Waxaan u maleynayaa inuu yahay ninkaaga Mudane Blog, midigta, waxaan u isticmaali lahaa Firefox kombuyuutarkayga muddo haatan laga joogo hal sano oo aanan dib u eegin tan iyo markaas. Qof kasta oo wax ka ogaada wax ku saabsan softiweerka kumbuyuutarka ayaa kuu sheegi kara in Firefox uu yahay biraawsarka sare ee gacmaha hoos loo dhigo. Weligay iskama dayin softiweerka Thunderbird maxaa yeelay Muuqaalka 2007 ee Xafiiska Enterprise aad buu u fiican yahay wuuna ii shaqeeyaa wax weyn. Maxaa loo badalayaa hadii aan la jabin. IE 6-7 wuu jabay inkasta oo, wakhti kasta oo aan ka shaqeeyo saaxiibaday, qoyskayga, saaxiibkay khadka tooska ah, ama qof uun doonaya caawinaad markasta waan rakibaa ama u sheegaa inay helaan Firefox. Waa maskaxdayda buuggayga.
Kaliya waxaan rabaa inaan ogaado sababta Microsoft ay ugu maleyneyso inay sii deynayaan biraawsar sare, miyay gebi ahaanba ku liitaan adduunka ku hareeraysan? Sababtoo ah waxay u maleynayaan in barnaamijkooda software-ka uu yahay mid aad u cajaa’ib badan oo dadku si uun u isticmaali doonaan Mise waa sababta oo ah Microsoft ayaa maalin walba bilyan bilyan aruurinayay waxayna dhaheen “iska ilow macaamilka dan kama lihin waxa ay u maleynayaan” sidaa darteed waxay kaliya ku qasbeen suuqa biraawsar aan qiimo lahayn oo aan jawaab celin lahayn. Nacasyo! Ma ahan sida aan haysto kombiyuutar yarky ah, IE wuxuu u shaqeeyaa sida qashinka nidaam kasta. Waa inay ku jirtaa lambarka softiweerka ama wax.
Kaliya madadaalo ayaan u raray maanta si aan u arko haddii ay ku fiicnaatay mucjiso (nope) wali nuugayo. Ka dib waxaan is iri "Maxay, maxay sidaas ugu socotaa" markaa waan baaray (Waa maxay sababta Internet Explorer si tartiib ah u soo rarto) dabcan waxaan u isticmaalay raadinta bogga guriga Google ee Firefox. Waxaan ku dhammeeyay halkan ka dib markii aan raacay xiriiriye ka socda degel kale oo maqaalkan oo kale ku dul yaal. Waxaan helay dhinac raad raac si aanan wali jawaabtayda wali u helin. Tag Firefox Tag! Laadadka Bill Gates ee lowska innaga dhammaanteen hal mar qofkiiba si joogto ah. Waxaan ogaan doonaa hal sawir oo dib loogu celiyo FF in kastoo, ay xun tahay isticmaalka xusuusta. Fikirka si fudud loo hagaajiyay, deg deg ah, oo aan dib u bilaabin ayaa hagaajin doona taas.